China RGB Dynamic LED Panel ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | Huayuemei
Ihe RGB Dynamic LED Panel
Nkọwapụta 240 * 240 * 1.6mm
Ikanam Size SMD5050
Ikanam Qty 64PCS
Agba temperture NKP
Ike 36w / PC
1.Power elu gị mbọn & mgbasa ozi
N'ụwa taa siri ike, akara aha na mgbasa ozi gị kwesịrị ịpụta iche na ihe okike na ihe ịtụnanya. Ọ dị ezigbo mkpa iji ego rụọ ọrụ nke ọma n’emebighị echiche na mbido. Ohere ndi HYM Dynamic LED pan na-enye enweghi oke. Naanị site na ịgbanwe ọdịnaya na ịkọwapụta akụkụ nke mbipụta gị, ị mepụtara ụdị dị iche na iche na otu ụdị ihe ngosi.
Ekele maka igbe ọkụ dị ike, akara gị na-anọchi anya. Jiri ya ma mee ka ngosipụta ngosipụta nke ụlọ ahịa gị na ụlọ ahịa pụta.
2. Uru nke Dynamic ikanam Panel
• Ọ nwere ike ịbụ programmable na K-8000C Control kaadị site DMX512 propotol.
• Ìhè n’ìhè.
• Mfe iji wụnye na gị ìhè igbe ma ọ bụ celling.
• Mee ka ndị na-ege gị ntị banye na ahụmịhe ọhụụ pụrụ iche.
• Mfe-ewu modular imewe
• Easy mgbanwe nke ebipụta na bulite nke video animation
3. Site na mbadamba RGB LED nwere ike itinye, RGB nwere ike ịtọ ya na 16.7 nde agba dị iche iche .Usoro mgbatị a pụrụ iche na-adị mfe n'ime atụmatụ ọkụ ọkụ RGB gị iji nye ọkụ edo edo na agba ọ bụla. Onye ọ bụla ikanam bụ RGB, nke a pụtara na ha na-emepụta Red, Green na Blue agba na mgbe ikpokọta, nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla na agba na ụdịdị dị iche iche,
4. Nyere mgbanwe a na agba mgbanwe na programmability, anyị nwere ike ịmepụta usoro ihe omume dị mgbagwoju anya nke gụnyere gụnyere ngbanwu / gbanyụọ, na-enwu gbaa ma na-enwu gbaa yana yana mgbanwe agba nke nwere ike iweta ihe oyiyi akwa ebipụta.
Dynamic 'lightbox nwere ike ibido, kwụ ọtọ n'ụkwụ, wuru ma ọ bụ kwụsịtụrụ na eriri. Enwere ike ịhazi ya nke ọma, igbe ọ bụla nwere ike jikọta na netwọkụ ikuku na mpaghara ma nwee ike ibunye ya mmemme ọhụụ ozugbo usoro ejiji ọhụụ dị.
Ọ na-adị maka advertsing ákwà ìhè igbe & stretect celling, na-etinye maka yinye ụlọ ahịa, nkwari akụ, ụlọ ahịa mall, ụzọ ụgbọ oloko, ọdụ, ọdụ wdg
Nke gara aga: Ike dị elu Edge-lit LED Strip Light
Osote: RGB Dynamic Curtain LED Strip
Oghere Dynamic Led
Programmable ikanam Panel maka ákwà ìhè igbe